Man City vs Arsenal – Afar Meelood Oo Ay Ku Kala Badin Karaan Kooxaha City & Gunners Kulanka Maanta Ee Etihad Stadium | Bakool.net
Home / CAYAARAHA / Man City vs Arsenal – Afar Meelood Oo Ay Ku Kala Badin Karaan Kooxaha City & Gunners Kulanka Maanta Ee Etihad Stadium
Man City vs Arsenal – Afar Meelood Oo Ay Ku Kala Badin Karaan Kooxaha City & Gunners Kulanka Maanta Ee Etihad Stadium
Manchester City ayaa ku soo dhaweyneysa Arsenal garoonka Etihad Stadium maanta iyadoo kooxda horyaalka difaacaneysa ay dooneyso inay hogaanka Liverpool ka dhigto labo dhibcood.
CIty ayaa badisay afartii kulan ee ugu danbeysay ee ay ka horyimaadeen Gunners oo ay ku jirto kulankii ugu horeysay ee Unai Emery ee uu macalin u noqday Arsenal bishii Agoosto.
Arsenal ayaa booska afaraad kala baxday Chelsea ka dib guushii ay bartamaha isbuuca ka gaareen Cardiff City, laakiin guuldarro lama filaan ah oo ka soo gaartay Newcastle ayaa keeni karta in kooxda Pep Guardiola ay jawaab culus ka bixiyaan.
Hadaba waxaan eegeynaa afar iska horimaad oo fure u noqon doona guusha ama guuldarada labada kooxood.
4. Raheem Sterling vs. Sead Kolasinac
Xiddiga garabka ka ciyaara ee England ayaa durbaba goolashiisa iyo caawintiisa ay gaareen tiro tobnaad xilli ciyaareedkan oo ay ku jirto goolkii uu ku dhaliyay Emirates Stadium maalintii furitaanka xilli ciyaareedka.
Sterling ayaa afar gool ka dhaliyay Arsenal, waxaana Saed Kolasinac looga baahan yahay inuu qaab ciyaareedkiisa ugu sareeya la soo baxo si uu u celiyo Sterling maanta.
Kolasinca ayaa si weyn uga qeyb qaata weerarka kooxda Gunners laakiin waxa ay taasi keeni kartaa inuu daafaca dayaco, waana sababta Kolisanac looga baahan yahay inuu dishibillin la yimaado marka uu weerarka ka soo laabanayo.
3. Aymeric Laporte/John Stones vs. Alexandre Lacazette/Pierre-Emerick Aubameyang
Laporte ayaa ka mid ah daafacyada dhexe ee ugu fiican Premier League xilli ciyaareedkan, halka Aubameyang uu yahay xiddiga labaad ee ugu goolasha badan horyaalka, waxaana labadaan xiddig ay boosaskooda ku heystaan xiddigo ay si fiican isku fahmeen.
Labada weeraryahan ee Arsenal ayaa si toos ah uga qeyb qaatay 34 gool oo ka mid ah 50ka gool ee ay Arsenal dhalisay xilli ciyaareedkan, waxaana ay ka horimaan doonaan daafac shabaqa ilaashada 10 jeer. Labadee ayaa gacanta sarre heli doona kulanka Etihad?
2. Leroy Sane vs. Stephan Lichtsteiner
Daafaca midig Hector Bellerin ayaa muddo sagaal bilood ah garoomada ka maqnaan doona taasoo siin doonta Lichtsteiner fursad uuku soo bandhigo qibradiisa qeybta labaad ee xilli ciyaareedka.
35 jirkaan reer Switzerland ayaan laheyn orodka Bellerin ama kan Leroy Sane. Shantii kulan ee ugu danbeysay, Sane waxa uu dhaliyay labo gool waxaana uu caawiye ka ahaa afar gool taasoo soo jeedineysa in Lichtsteiner ay soo mari doonto galab mashquul badan.
1. David Silva vs. Granit Xhaka
Madaama uu yahay burburiyaha khadka dhexe ee Arsenal waxa ay ciyaarayaan shaxda dheymanka, Granit Xhaka waxaa maanta mashquulin doona David Silva.
Inkastoo ay da;diisa kor u dhaafeyso 30 sanno, Silva ayaa weli ka mid ah xiddigaha ugu fiican Premier League, sidaasi darteed Xhaka ayaa u baahan inuu feejignaan dheeri ah muujiyo.
Previous: Ra’iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo Kormeeray dhismaha Xabsiga Guud ee Muqdisho oo La Dhamaystiray
Next: Mukhtaar Roobow oo Xabsiga laga sii deynayo iyo Madaxeynaha Koonfur Galbeed Oo Kulama la qadanayo Madaxda Dowlada..